Fiaraha-miasa - SmartMe
Dom » fiaraha-miasa
Miaraha miasa amin'ny SmartMe!
Afaka miara-miasa aminay amin'ny fomba maro samihafa ianao. Fantaro ireo rehetra ireo!
Miorina ao amin'ny SmartMe. Amboary ny soratra na asao vonona ho anay. Hivoaka amin'ny sokajy izay safidinao io - News, Guide, Column.
Tonga mpiara-miasa aminay izahay ary hampiroborobo ny orinasanao amin'ny fantsanay. Mandritra ny vanim-potoanan'ny fiaraha-miasa dia hampiseho ireo fitaovanao izahay (oh. Logos animé) taloha sy aorian'ny fampakarana ireo horonan-tsarimihetsika.
Alefaso ao amin'ny tranokalanay ny dokambarotra anao ary mahatratra mpampiasa bebe kokoa. Hapetraka ny sora-baventy fanaovana dokambarotra mba ho mora hitan'ireo mpampiasa amin'ny fomba tsy manelingelina.
Manome anay ny vokatrao izahay ary manangana famerenam-bola miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny pejinao na ny fivarotanao Azo aomina ao amin'ny lahatsoratra sy video ny famerenana.
Raha mila dokam-barotra midadasika sy feno momba ny fantsona rehetra izahay, dia arahinay. Izahay dia hanomana anao tolotra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Hihaona amin'ireo mpamokatra sy ireo arisialy anatiny izay efa miasa aminay!
Fantatsika ny zavatra soratantsika ary ny fomba hanoroantsika azy Hamarino ny fanamarinanay!